मेरो गन्थन: August 2010
मैले त हाँसो थाम्न सकिन, तपाईंहरु पनि एकैछिन् मनोरञ्जन लिनुस् ...
Posted by inashrestha at 11:03 PM2comments:
"ट्रिङ ट्रिङ, ट्रिङ ट्रिङ, ट्रिङ ट्रिङ"
फोनको घन्टी लगातार बजिरह्यो । यसो घडी हेरें रातको ३ बज्न लागेको थियो । १ बजे छोरोलाई सुताएर भर्खर निदाउन लागेको मात्रै थिएँ । फोन उठाउन अल्छी लाग्यो, म उठाउने कोसिस गर्दिन । फोनको घन्टी फेरि बज्न थाल्छ । आफुसँगै मस्त निद्रामा सुतेको छोरो उठ्छ कि भन्ने पिर लाग्यो । अनि विवश भएर फोन उठाउन गएँ । पक्कै नेपालबाट आएको फोन हुनुपर्छ । जति भने पनि नलाग्ने कस्तो होला नेपालको मान्छेलाई । भित्र भित्र मुर्मुरिंदै फोन उठाएँ ।
'हेलो, दाइ ' उताबाट अपरिचित नारीको आवाज आयो । उनको स्वर अलिक चर्को थियो । शायद आत्तिएर हो या एक्साइटेड भएर मैले खुट्ट्याउन सकिन ।
"तपाईंलाई त चिन्न सकिन, को बोल्नु भो ?" मलाई दाइ भनिसकेपछि त पक्कै पनि चिनेको मानिस हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । तर मैले सम्झिन सकिन, को हुन उनी भनेर ।
'दाइ म मेरिना । चिन्नु भयो ? तपाईंको घर भन्दा तल्लो लाइनको, बाबुकान्छाको ठुली छोरी ।' उनीले आफ्नो परिचय दिइन ।
अचानक एक दशकको विदेश बसाइमा पहिलो पल्ट आफुले सोच्दै नसोचेको मान्छेको फोन आएकोले अलिकति औपचारिकता पुर्‍याउनै पर्‍यो ।
"के छ ठुली हालखबर ? अनि सबै जना आरामै ?" नाम मेरिना भए हामी बोलीचालिमा उसलाई ठुली भनेर नै बोलाउँथ्यौं ।
'सबै ठिक छ दाइ ।'
"के भएर सम्झियौ त यतिका वर्षपछि ?"
'काम परेपछि सम्झनै पर्‍यो नि दाइलाई ।' उनीले सिधै भनिन् ।
"अनि के काम पर्‍यो त्यस्तो मैले गर्ने ?" शायद पैसा चाहिएर होला, मनमनै गुने ।
'दाइले स्पोन्सर लेटर पठाइदिन पर्‍यो मेरो लागि । '
म झसङ्ग भएँ, आफुले सोच्दै नसोचेको जवाफ पाएर ।
"केका लागि ?"
'मेरो डिभी परेको छ नि दाइ । स्पोन्सर लेटर चाइन्छ रे त्यसैले ।'
"आजकल त वेलकम लेटर मात्रै भए पुग्छ रे नि होइन र?" मैले सुनेको कुरो भनें ।
'होइन दाइ स्पोन्सर लेटर नै चाइन्छ रे?' उनीले अड्डी लिइन ।
"हेरम त्यसको लागि म के गर्न सक्छु । बरु ठुली के के चाइन्छ मलाई ईमेल गर । मैले सकेको गरौंला नि ।" मैले कुराकानी छोट्ट्याउने कोसिस गर्छु ।
'हस्, म तपाइँलाई इमेलमा लेखेर पठाउँला ।'
"अनि ठुली अर्को कुरो चैं फोन गर्दा त्यहाँको कि बिहान या बेलुकी मात्रै गर्नु । दिउँसो गर्दा याहाँको राती हुन्छ ।" आफन्तहरुलाई बल्ल बल्ल बानी पारेको थिएँ रातिमा फोन नगर्नलाई ।
'ओहो सरी है दाइ । मैले डिस्टर्ब गरें कि क्या हो ?'
"केइ छैन । पछि कुरा गरौंला है ।" त्यसको लागि ढिला भैसकेको थियो ।
'हस्' फोन उतैबाट काटियो ।
म भने रनभुल्लमा परें के गर्ने भनेर । ३ बजिसकेको थियो । बिहान चाँडै अफिस जानु पर्ने भएकोले ओछ्यानमा पल्टिएँ । आफुलाई निद्रा लागेन । आमा छोरा भने मस्त सुतिरहेका थिए । शायद फोनले डिस्टर्ब गरेन होला दुबैलाई । म निदाउने यत्न गर्छु सकिन । कहिले यता फर्किने, कहिले उता पल्टिने गरिरहें । तर कतिखेर निदाएँ थाहै भएन । बिहानको अलार्मले पो मलाई उठायो । आमा छोरा अझै निद्रामै थिए । म भने नित्य कर्म सकेर आफ्नो अफिस लागें ।
आजलाई यत्ति मात्रै लेख्न पाएँ बाँकी अर्को पटकलाई ।
Posted by inashrestha at 12:04 PM No comments:
As of now, it is little shy toamillion hits on You Tube. But in near future it will get its mile stone to reach of 1 million hits. Nowadays, lots of Nepalese has access to the internet it might beacommon in upcoming days to get that much. For instant lets enjoy with beautiful song by Babu Bogati "SANNANI". This is one of my son's favorite too.
Posted by inashrestha at 7:08 PM2comments:
एकजना मित्रले भने
कवि आफ्नै कविताको पोइ !
मनमा खुल्दुली भो मलाई,
म सोध्न पुग्छु
कतै तपाईंको कविता भन्ने गर्लफ्रेन्ड छ कि ?
त्यसो भए किन त?
साहित्य प्रति मानिसको रुचि घटे
आफ्नो कविता आफुले भन्दा अरुले नपढ्ने भएसी
आफुले बाहेक अरुले नभोग्ने स्वास्नी जस्तो भएन र?
म सहमत हुन सकिन ।
कतिका स्वास्नी पोइल गएकै देखेकोछु मैले
कति बलात्कार भएको पनि देखेकै छु मैले
कति अरुसँग सल्केको देखेको छु मैले
भन्न नभएर मात्र हो
जहाँ संचारको पहुँच छ
इन्टरनेटको प्रभाव छ
र आजकाल सजिलो भएको छ
कतिका रचनाहरु पोइल गएका छन्
कतिका रचना बलात्कार भएका छन्
कति रचनाहरु अरुसँगै सल्केका छन्
न त यसको हिसाब किताब नै छ
न त सुरक्षाको ग्यारेन्टी नै
यी पनि हाम्रै देशको हाल बेहालबाट प्रभावित छन्
कति चोरका शिकार भएका छन्
कति डाँकाका पीडित छन्
कति लुटेराका आदी छन्
थाहा छैन वास्तविक रचनाकार को हुन भन्ने
जसलाई मन पर्‍यो उसले ट्याप्प टिप्यो
आफ्नो भित्तामा लागेर टाँस्यो
अनि आफ्नो बनायो
न कसैलाई सोध्नु छ
न कसैको अनुमति नै लिनु छ
आहा क्या काइदा !
यहाँ कविता मात्रै प्रताडित छैनन्
सबैजना सबैजसो पीडित छन् साहित्यमा
पाकिस्तानको बाढी जस्तो
हेइटीको भैंचालो जस्तो
हेर्ने मात्रै धेरै छन्
गर्ने कम नै छन्
कवि कविताको पोइ भए
कथाकार कथाका पोइ हुन्थे
गीतकार गीतका पोइ हुन्थे
यस्ता अनगिन्ती शिर्षक छन्
जसको न पोइ हुन्छ न जोइ नै
त्यसैले म मेरा मित्रसँग सहमत हुन सकिन ।
Posted by inashrestha at 5:52 PM2comments:
आज धेरै समय पछि पिउने रहर जाग्यो
अनि हरिभक्त कटुवालका यी कविताहरु सम्झिन पुगें ।
म आफ्नै बाटो हिंडिरहेको हुन्छु
पाइला अन्त कतै गइदिएको हुन्छ
तर मन अरु कसैको भइदिएको हुन्छ
म कायल छु ,
कहिले मैले यसलाई खाइरहेको हुन्छु
सपना बोकेर आइदिने रातहरुलाई एउटा सलाम
त्यहि सपना खोसेर लैजाने प्रभातलाई अर्को सलाम
यहाँ सजिलैसित जिउनलाई एउटा निहुँ पाएको छ
रक्सी बनाइदिने त्यो पहिलो स्रिष्टीलाई ठुलो सलाम ।
Posted by बागी at 7:07 PM No comments:
Posted by inashrestha at 11:30 AM No comments: